Taorian'ny volavolan-dalàna momba ny toeram-pambolena - Maninona ny CBD Oil dia "ara-dalàna" amin'ny fanjakana 50 rehetra?
Misy ara-dalàna avokoa ve ny menaka ny CBD any amin'ny fanjakana 50?
Nihanalefaka ny CBD Oil ary maro ny olona milaza fa ara-dalàna ao amin'ny fanjakana 50 rehetra
Salama, Izaho no mpisolovava indostrian'ny cannabis mamaly ny anao fanamainana ara-dalàna cannabis mba hahafahanao mampandanjalanja ny lalàna marijuana. Ary anio dia manana fanontaniana lehibe isika avy amin'ny mpijery ela, ary bandy mahavariana amin'ny ankapobeny. Handeha ho amin'izany izany isika tsy ho ela.
Fa ny anao aloha dia te-hifikitra mandra-pahatongan'ny farany satria rehefa hitanao fa ahita ahy mirona sy manala baraka izany sarin'i Richard Nixon izany.
Alohan'ny handinihantsika ny fanontaniana anio anefa, mandrosoa aloha ary avelao ireo hevitra ao amin'ny fanehoan-kevitra eto ambany. Tsy afaka mamaly ny fanontanianao aho raha tsy anontanianao izany. Ary raha midina eo ianao, omeo anay ny toy izany ary fitran-tanana.
Ny fanontaniany androany dia avy amin'i JX Fit, ary nanontany izy hoe, "Betsaka ny orinasa milaza fa manatitra voninkazo hemp an'ny CBD any amin'ny fanjakana 50 izy ireo, ary tena ara-dalàna tanteraka izany satria latsaky ny 0.3% THC ary tsy avy amina azy io. zavamaniry marijuana. Avy amin'ny zavamaniry hemp. Sa ara-dalàna ve?"
Fanontaniana lehibe. Ary ny hanomboka, aleo ho azo antoka fa handrakotra ny lalàna federaly sy ny fanjakana isika, dia andeha isika hiresaka momba ny toekarena kely, kely iray amin'ny fihariana ekonomika 101.
Henoy izany ao amin'ny PodCast na Jereo ny YouTube ao dia menaka ara-dalàna ny solika cbd any amin'ny fanjakana 50 rehetra
FIVAVAHANA MISY: Mpisolovava rongony Maryland
Nanjary be mpitia ny CBD, ary be dia be ny olona mandray risika sy ho mpandraharaha ary mivarotra ireo menaka CBD ireo.
Vao niresaka tamin'ny rahalahiko aho. Manome solika ny CBD amin'ny alikany. Mety hanome ny menaka CBD amin'ny alikanao koa ianao. Tsy azoko antoka.
Sa ara-dalàna ve? Eny ary, maro ny fanjakana, maro, fanjakana maro no mahita ny hazavana rehefa tafiditra ao amin'ny CBD miaraka amin'ny fikarohana ara-pitsaboana izay tsy mitsahatra manangona ny tombontsoa azo, ary tsy hiresaka momba ny tombontsoa azo avy amin'ny CBD isika ankehitriny, fa ho avy izahay mifanakalo hevitra momba ireo fanjakana 46 izay nanara-dalàna ny karazana rongony rongony na menaka CBD ho an'ny fitsaboana.
Raha ny marina dia misy fanjakana efatra fotsiny izay tsy mbola nahazo ara-dalàna ny CBD mpitsabo, ary ireo fanjakana efatra ireo dia i Idaho, South Dakota, Kansas, ary mazava ho azy, Nebraska.
Eny marina, marihiko fa mbola tian'izy ireo fa ny lalàna federaly dia ny lalàna mifehy ny fibaikoana, izay iray amin'ireo antony mahatonga antsika hikoropaka an'io sarin'i Richard Nixon io. Ny lalàna mifehy ny akora mifehy ny otrikaretina dia ny fandaharam-potoana iray, izay mazava ho azy ny hemp. Hemp, raha mitombo amin'ny sehatry ny saha, dia mitovy amin'ny Lalàna mifehy ny fifehezana fandrarana toy ny cannabis hafa.
Ary eritrereto izao, satria raha mihinana rongony ianao noho ny fikarakarana azy, dia voninkazo izany, ny hanamboarana azy amin'ny fomba hafa tsy itovizany noho ny hoe manangona hemp ho an'ny tahony ianao, ny fibre, na ny endrik'izany. voa, izay tena mahaliana, dia voadidy amin'ny lalàna mifehy ny fifehezana.
Ka rehefa mandeha any Costco ianao ary mividy ny tenanao ho an'ny fo be dia be, ny fo feno fa afaka mahazo ny fo bempona rehetra, ireo izay hitanao any amin'ny fivarotanao, dia ao izy ireo satria voahilika manokana amin'ny Controlled Lalàna mifehy.
Sahala ny esorina na ny tady na ny tady, na ny omby, ny hempherds, ny tahiry ao anatiny, izay manana fananana indostrialy ho azy.
Ahoana ary ahoana no ahafahan'izy ireo mametraka an'io fanambarana io fa avy amin'ny hemp ka noho izany dia tsy misy dikany? Eny, tsy afaka izy ireo. Angamba mifangaro izy ireo amin'ny zavatra ho avy.
Angamba izy ireo dia manandrana manantena ny tsena. Izahay dia hifampiresaka momba ny raharaha mpandraharaha eto amintsika amin'ny resaka kely. Voalohany, handeha amin'ny alàlan'ny lalàna federaly sy ny fiovan'ny federasiona ho hemp isika.
Izaho dia Illinois. Tena tsy ela akory izay, omaly tokoa, nanao sonia i Bruce Rounder Programam-pahefana ho an'ny pilotan'ny Illinois, koa afaka manomboka manome torohevitra ho an'ireo tantsaha ao amin'ny fanjakana isika mikasika ny fomba ahafahan'izy ireo mitombo hemp ho toy ny safidy mahomby.
Tsy mbola nidina ny volavolan-dalàna momba ny toeram-pambolena, ary raha maniry bebe kokoa ianao dia afaka manaraka ny vaovao momba ilay volavolan-dalàna momba ny toeram-pambolena miaraka amin'ny tenifototra #FarmBillFriday, ary hahazo fanavaozam-baovao avy amin'ny Kongresy momba ny volavolan-tanimbary izay misy ny fiteny ara-dalàna hemp. napetraka tao amin'ny volavolan-dalàna nataon'i Senatera McConnell avy any Kentucky. Nanomboka fandaharan'aretina hemp izy tany amin'ny ambaratonga federaly taona vitsy lasa izay, ary mandeha tsara amin'ny lalana mahitsy. Ankehitriny dia manana ny volavolan-dalàna momba ny toeram-pambolena izahay izao.
Nandoa ny volavolan-dalàna ny Farm Farm ary ny CBD Hemp dia lasa ara-dalàna tamin'ny volana Desambra 2018.
Andao hiresaka ara-toekarena ny antony mahatonga ity olona ity hanao izany. Satria izaho no mpisolovava tena cannabis indrindra misy. Izany no iantsoantsika ny lalàna, puffery. Na izany aza, mazàna, rehefa milaza zavatra ara-dalàna ianao, dia tsy tena lazainao ny tsara indrindra. Satria rehefa miteny zavatra tsara indrindra ianao dia zavatra zavatra mendrika izany.
Ny hemp "tsara indrindra" dia mety ny dokam-barotra.
Izany no tsara indrindra aminao. Raha mihaino an'i Miles Davis aho ary heveriko fa mpilalao anjombona tsara kokoa noho i John Coltrane izy io, famoahan-kevitra semantaly fotsiny izany mikasika ny zavatra tiako indrindra noho ny tianao. Ny tsara indrindra amiko dia tsy tsara indrindra aminao.
Ny ara-dalàna dia matetika kely voapaika sy maina. Tsy misy toa ny lalàna tsara indrindra. Azonao atao ny milaza fa ianao no mpisolovava tsara indrindra, saingy tsy misy lavaka io, ara-dalàna ve, izany dia matetika ny resaka eny / tsia. Raha misy ny indostria izay tena sarotra ho valiny, dia ilay orinasa cannabis, satria tsy misy valiny eny tokoa / tsy misy valiny momba ny maha-ara-dalàna ny cannabis sy ny menaka CBD nalaina avy amin'ny voninkazo hemp, izay mitombina tsara.
Avy eo dia nanontany ny 0.3% izy. Ny voninkazo hemp dia matetika manana CBD ao aminy, fa THC kely loatra. Ahoana fotsiny izany. Tsy fantatro. Lazaiko anao, arakaraka ny hahafantaranao momba ity lalàna federaly sy ny cannabis rehetra ity, ny maha mitovy anao, tsara angamba ianao dia afaka mampiasa ny ara-dalàna toy ny teny qualitative fa mifanohitra amin'ny teny miisa sy valiny hoe tsia / tsia.
Inona ny tsy fahombiazan'ny fitsipiky ny CBD avy amin'ny fitantanana ny sakafo sy ny fanafody?
Ka raha mpandraharaha aho ka afaka manao jacks be tsy mivarotra solika CBD, ary mijery ireo angon-dramatoa aho, ary hitako fa lasa malaza be i CBD, ara-dalàna ao amin'ny fanjakana 46 izany, manara-dalàna izany amin'ny sehatra federaly , satria mety hiteny ianao fa rongony ara-pitsaboana, fa avy eo ianao milaza fa ny anao dia avy amin'ny hemp, ary miandry ny volavolan-dalàna momba ny toeram-pambolena ianao.
Ankehitriny nisy ve nandray andraikitra? Eny tokoa, ny FDA dia nandefa taratasy fiatoana sy faniriana vitsivitsy tamin'ny orinasan-tsolika CBD an-tserasera tamin'ny taona 2015 sy 2016, saingy mbola tsy nahita olona nosamborina aho, nalaina am-pitiavana, ary nohidiana ny orinasan'ny CBD. Izay angamba no resahina. Satria ny lalàna iray dia tsara tahaka ny hoe firy ny olona hampihatra izany. Afaka ambara aho fa ny fetra ny hafainganam-pandehany dia 70 kilaometatra isan’ora, raha tsy misy olona eo izay ho governoran’ny milaza fa 70 kilaometatra isan’ora, tsy misy na inona na inona ny hafainganam-pandehany, sa tsy izany?
Ka tsy nanidy na inona na inona i Jeff Sessions. Nahoana? Misy ny fifidianana amin'ny volana novambra, saingy mety ho fantatr'izy ireo ihany koa ny fihetseham-pon'ny besinimaro ho tokana, ary fantatr'izy ireo fa midina i #FarmBillFriday, ary fantatr'izy ireo fa fanjakana 46 no efa nanao an'io lalàna io, ary izy ireo dia mety ho, angamba siansa ao ambadika.
Noho izany dia tian'izy ireo ny hidiran'ny vahoaka ny menaka CBD kalitao avo lenta ary izany no antony nilazan'izy ireo fa ara-dalàna io. Manararaotra amin'ny fivarotana varotra. Tena hafahafa hafahafa eo amin'ny fivarotana varotra, satria ny ara-dalàna matetika dia tsy zavatra takalon'aina izay ireharehanao. Fa raha amin'ity tranga ity, angamba.
Ary firy ny angon-drakitra mivoaka eto? Tsara izany, sary tsara ity ary andeha isika hamarana ny fizarana amin'ny ... andraso, tsia. Hamaranana ity fizarana ity isika amin'ny fanamelohana an'i Richard Nixon, manapotika ny endriny ratsy sy ratsy. Fa mialoha izany, andao hiresaka momba ny haben'ny solika CBD nipoaka amin'ny resaka ...
Raha te hahita ianao raha misy olona malaza, dia afaka jerena izay tadiaviny, na raha misy zavatra niova rehefa mandeha ny fotoana, dia ity fironana ity. Ary misy andalana telo izay hoentintsika. Hametraka izany amin'izao fotoana izao aho izao. Hitanao fa manga, mavo, ary mena ary ny mena no miloko. Inona ny mena? Eny ary, andao aloha hiampita ny manga.
Ny manga manga eo ambany, ny fototry ny fototra, izany dia hemp. Ary araky ny hitanao dia tsy mandeha na aiza na aiza ny hemp. Ary ny eo amboniny, ilay hoe mena ny sisiny mena, toa izy io namerina azy io tamin'ny febroary 2017, izany dia tena sisan-kina.
Ary araky ny hitanao, ny ganja dia fomba malaza kokoa noho ny hemp, nefa tsy misy na iza na iza malaza tahaka an'io cannabidiol io, fa CBD kosa. Jereo izy. Vao efa-taona lasa izay na vao tsy ela akory no nanombohan'izany, ary saika tsy naheno ary tsy dia be mpahalala, toy ny hemp. Ary izao dia efa nesorina fotsiny izany.
Raha mahatakatra bebe kokoa momba ny CBD sy ny mari-pahaizana rongony ara-pitsaboana ny olona mampiasa rongony sy cannabis dia mihamalalaka hatrany. Eny ary, farany, ny zavatra tsy fanao ary vendrana nataon'ity lehilahy ity tamin'ny taona 1970 mba hahazoana antoka fa tafiditra ao anaty lalànan'ny Controlled Substances Act ny hemp, fa ny voany, ny fibre na ny diloilo.
Oh, halako ianao, Richard Nixon. Fahadisoanao rehetra izao.
Ny mpahay lalàna momba ny angovo dia mitondra anao amin'ny fanontaniana momba ny lalàna momba ny lalàna momba ny Hemp
Raha manana fanontaniana ianao, miangavy azy ireo ao amin'ny fanehoan-kevitra na mitsidika ny cannabisindustrylawyer.com ary tsindrio ny bokotra miantso anay. Mandra-pahitako anao amin'ny manaraka, tadidio, tohizo io lalàna io.
Tags:menaka cannabidiol, lalàna rongony, mpisolovava tafahoatra tom howard, CBD Oil, menaka hemp feno spektrum, hemp cbd, fanamafisana ara-dalàna ny hemp, menaka hemp, ara-dalàna ny cannabis